Laba Askari Ayaa Ku Dhimatay Weerarkii Al Shabaab Ay Ku Qaadeen Degmada » Axadle Wararka Maanta
Laba askari ayaa ku dhimatay weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen degmada
By Newsroom	 Last updated Apr 8, 2021
Ugu yaraan labo askari ayaa ku dhimatay weerar ay al-Shabaab saakay ku qaadeen bar koontarool oo ku taal degmada Mahadaay ee gobolka Sh / dhexe, sida uu Axadle u sheegay sarkaal ka tirsan milatariga Soomaaliya.
Iska hor imaadka oo socday ku dhowaad 10 daqiiqo ayaa ka dhacay deegaanka Buurane oo ka tirsan degmada Mahadaay ee gobolka Sh / dhexe.
“Laba askari ayaa lagu dilay barta koontarool waxaana na haleelay dhibanayaal.” Axadle ayaa u sheegay sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya.
Al Shabaab ayaa u suuragashay inay la wareegaan kontorool ku yaala degmada Mahadaay ee gobolka Shabellaha Hoose.
Sikastaba, Al-Shabaab ayaa markii dambe isaga baxay koontaroolka. Bartamihii bishii la soo dhaafay, dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraray degmada Mahadaay ee gobolka Sh / dhexe halkaasna ay ku heysteen saacado.
Degmada Mahadaay ee ku teedsan webiga Shabeelle waxay dhacdaa koonfur-galbeed ee gobolka Shabeellada Dhexe waxayna qiyaastii 120-km dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya